कुलमानले गरे यस्तो अर्को चमत्कार, जनतामा खुसी ! – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /Banner news/कुलमानले गरे यस्तो अर्को चमत्कार, जनतामा खुसी !
नेपाल विधुत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङ आएपछि लगातार नेपाली जनतालाई शुभ समाचार दिइरहका छन् । दैनिक १८ घण्टा लोडसेडिङको मार खेप्न बाध्य जनतालाई एकाएका सदाका लागी लोडसेडिङ हटाएर नेपालीको मनमनमा बास बसेका कुलमानले कुशल नेतृत्व दिएर जनताको स्यावासी पाएका छन् ।
तर उनलाई बदनामीत बनाउँन कतिपय राजनितिक नेतृत्वनै लागिरहेको पनि बुझिन्छ । यस बर्ष पनि कुलमान नेतृत्वको नेपाल विधुत प्राधिकरणले चमत्कारनै गरेको छ । कुलमान आफैँ फिल्डमा खटेर सामान्यता एक बर्षमा गर्न नसकिने भनिएका कामहरु गरिसकाएका छन् । कतिपयले आफैँ फिल्डमा उत्रिएर उनले दिएको निर्देशनलाई नकारात्मक रुपमा प्रचार गरे पनि अन्तत त्यसले सुखद परिणमा निकालेको छ । कुलमानले फेरी एकपटक आफुलाई प्रमाणित गरेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७५-७६मा मात्रै ३० वटा नयाँ सवस्टेसन निर्माण सकिएका छन् । नेपालको इतिहासमा एकै आर्थिक वर्षमा यति धेरै क्षमताको सवस्टेसन एक वर्षमै निर्माण सकिएको पहिलोपटक भएको प्राधिकरण बताउँछ ।
एक वर्षको बीचमा प्राधिकरणले ७०७.५ एमभीए क्षमताको सवस्टेसन निर्माण गरेको छ । यसअनुसार नयाँ सबस्टेशनबाट मात्रै ७०७ मेगावाट बिजुली आपूर्ति गर्न सकिन्छ । यो वर्ष २२० केभी क्षमता ९३३० एमभीएको ढल्केबर सवस्टेसन चार्ज हुँदा १३२ केभीका ८ वटा सवस्टेसन तयार भए । जसको क्षमता २५९ एमभीए छ । त्यसैगरी यो वर्ष ३३ केभीका २१ वटा सवस्टेन बने, जसको कुल क्षमता १२८ एमभीए छ ।
विशेषगरी विजुली झ्याप्प९झ्याप्प गएर पटक-पटक ट्रिपिङ हुने समस्या समाधानका लागि प्राधिकरणले देशभर सवस्टेसन निर्माण र स्तरोन्नति गर्ने काम गरिरहेको छ ।
प्राधिकरणले गत वर्ष नै मुजफ्फरपुर ढल्केबर प्रसारणलाइन क्षमता विस्तार अन्तरगत नेपालतर्फको नयाँ सवस्टेसनको निर्माण सकायो । २ सय २० केभी सवस्टेसनको निर्माणमा संलग्न सेन्ट्रल चाइना पावर ग्रीड (सीसीपीजी)ले ढिलाइ गरेपछि गत असोजमा ३० करोड जरिवाना गरेर ठेक्का तोडिएको थियो ।
यो वर्ष विजुली आयात लक्षित र आयोजना केन्द्रित सवस्टेसन मात्रै बनेनन् । जनताको घरमा जाने विजुलीको वितरण व्यवस्थापन गर्न थुप्रै सवस्टेसनहरु पनि थप भए । दार्चुलामा सवस्टेसन तयार भएलगत्तै पहिलोपटक जिल्ला राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडियो । त्यसअघि सिंगो दार्चुला भारतबाट आउने विजुलीमा निर्भर थियो ।
यस्तै डडेलधुराको स्याउलेमा १३२ ३३ केभी सवस्टेसन यसै वर्षबाट चल्यो । ७ नम्बर प्रदेशका पहाडी जिल्लामा विद्युत आपूर्तिलाई नियमित र भरपर्दो बनाउन यसले सघाएको छ ।यो सवस्टेसन बनेपछि ७ नम्बर प्रदेशका पहाडी जिल्लामा निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनाका विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रवाह गराउन पूर्वाधार पनि तयार भएको छ ।
प्राधिकरणले डडेलधुराबाट बैतडी हुँदै दार्चुलासम्म र डडेलधुराबाट दिपायल हुँदै अछामसम्म विद्युत आपूर्ति गर्दै आएको छ ।गत वर्ष नै झापाको सुरुङ्गास्थित घैलाडुब्बा सवस्टेसन सञ्चालनमा आयो । यो सवस्टेसन घैलाडुब्बा, कुमारथोक, राजगढलगायतका स्थानमा विद्युत आपूर्तिलाई व्यवस्थित, भरपर्दो र प्रभावकारी बनाउन निर्माण गरिएको हो ।
नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको लगानी र एसियाली विकास बैंकको सहुलितपूर्ण ऋणमा निर्माण भएको ३३-११ केभी घैलाडुब्बा सवस्टेसन सञ्चालनमा आएपछि लामो दुरी र ओभरलोडिङका कारणले पटक९पटक लाइन ट्रिप हुने र लाइन हुँदा पनि कम भोल्टेजका कारण त्यस क्षेत्रमा बत्ती, पंखा, मोटरलगायतका विद्युतीय उपकरण नचल्ने समस्या समाधान भएको छ ।
यसै वर्षबाट रोल्पाको होलेरी सवस्टेसन सञ्चालनमा आएका छन् । सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको लगानीमा रोल्पाको रुन्टीगढी गाउँपालिकामा निर्माण भएको ३३-११ केभी होलेरी सवस्टेसनले पनि काम थालेको छ ।
कपिलवस्तुको महाराजगञ्ज सवस्टेसनले पनि गत वर्षबाट सेवा दिन थाल्यो । ३३-११ केभी सवस्टेसनबाट विद्युत वितरण सुरु भएपछि उपभोक्ताले अविछिन्न रुपमा गुणस्तरीय विद्युत् सेवा उपभोग गर्न पाएका छन् ।
तनहुँको मार्कीचोकमा निर्माण भएको १३२-३३ केभी सवस्टेसन पनि यो वर्षको अर्को सम्पन्न भएको विद्युतीय पूर्वाधार हो । सवस्टेसन सञ्चालनमा आएसँगै गोरखामा रहेको भोल्टेज ड्रप, पटकपटक लाइन ट्रिप हुने, भोल्टेज नहुने लगायतका समस्यामा कमी अएको दावी प्राधिकरणको छ ।
यसअघि दमौली-डुम्रे-आँबुखैरेनी हुँदै ३३ केभी लाइनबाट गोरखामा विद्युत् आपूर्ति भइरहेको थियो, लामो दूरीबाट विद्युत आपूर्ति हुँदा धेरै समस्या थियो, हाल मार्कीचोक सवस्टेसनबाट आँबुखैरेनी हुँदै गोरखातर्फ विद्युत् जान्छ । जसबाट ३३ केभी लाइनको दुरी कम हुँदा प्रणालीको चुहावट चुहावट घटेको र भोल्टेज ड्रप तथा ट्रिपिङमा सुधार आएको प्राधिकरण बताउँछ ।
मार्कीचोक सवस्टेसनबाट १३२ केभी लाइनलाई मार्फत प्रवाह हुने विद्युतलाई निर्माणाधीन मर्स्याङदी-मातातीर्थ २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाको १३२-२२० केभी सवस्टेसनमार्फत २२० केभीमा स्टेप अप गरी काठमाडौंमा पनि विद्युत ल्याउन सकिन्छ ।
नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ९ करोड ३६ लाख रुपैयाँ लगानीमा निर्माण भएको ३३-११ किलोभोल्ट (केभी) राजापुर सवस्टेसनबाट करिब २० हजार ग्राहकले गुणस्तरीय र विश्वसनीय विद्युत् प्रयोग गर्न पाएको प्राकिरणको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
पहिले राजापुर क्षेत्रमा टिकापुरबाट ११ केभी लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति गरिएको थियो । लामो दूरीबाट लाइन लगिएकाले भोल्टेज ड्रप हुने, पटकपटक लाइन ट्रिप हुने लगायतका समस्या थिए । हाल टिकापुरबाट ३३ केभीबाट राजापुर सवस्टेसन विद्युत जान्छ, त्यसपछि मात्रै ११ केभीबाट वितरण गरिने हुँदा भोल्टेज सुधार भएको प्राधिकरणको नेपालगञ्ज क्षेत्रीय कार्यालयले जनाएको छ ।
सप्तरीको विद्युत् आपूर्तिलाई नयाँ १३२-३३ केभी सब स्टेसनले सुधार गरेको छ । ३६ करोड रुपैयाँ लगानीमा गत वर्ष नै निर्माण सम्पन्न भएको रुपनी सवस्टेसनले पूर्व-पश्चिम १३२ केभी राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीबाट प्रवाह भएको विद्युतलाई सप्तरीमा आपूर्ति गर्छ ।
यसअघि सिराहाको लहानबाट करिब २५ किलोमिटर ३३ केभी लाइनमार्फत विद्युत् ल्याएर रुपनीमा रहेको ३३-११ केभी सवस्टेसनबाट सम्तरी विभिन्न ठाउँमा आपूर्ति भइरहेको थियो, लामो दूरीका कारण आपूर्ति विश्वसनीय नभएपछि नयाँ सवस्टेसन सञ्चालनमा ल्याइएको हो । रुपनी सवस्टेसनबाट ५ वटा फिडरमार्फत सप्तरीका राजविराज, बलरदा, बरसाइनलगायतका क्षेत्रमा विद्युत आपूर्ति गरिएको छ ।
रोल्पाको कोइलाचौरमा निर्माण भएको ३३-११ केभी सवस्टेसनले गत वर्ष नै सेवा सुरुवात गर्‍यो । रोल्पा र सल्यानको विद्युत् आपूर्तिलाई विश्वसनीय र गुणस्तरीय बनाउन यसले सघाएको छ ।
बाँकेको धामपुरमा निर्माण भएको ३३-११ केभी सवस्टेसन पनि नयाँ हो । प्राधिकरणले २०६७ को जेठबाट धामपुर सवस्टेसन निर्माण सुरु गरेको थियो । ठेक्कापट्टा लगाएर ठेकेदारको कमजोर कार्यसम्पादनलगायतका समस्या झेल्दै १०-११ वर्षदेखि अलपत्र पारिएको रुग्ण सवस्टेसन निकै जोडबलपछि गत वर्ष नै सञ्चालनमा आएको हो ।
सप्तरीको बोदेबर्साइन सवस्टेसनबाट पनि गत वर्षमै सेवा सुरु भएको छ । यो नबन्दासम्म सप्तरीको दक्षिण९पश्चिम क्षेत्रका उपभोक्ताले कम भोल्टेजका कारण पानी तान्ने मोटर चलाउन नपाउने, बत्ती नबल्ने लगायतका समस्या झेल्दै आएका थिए ।
निर्माण तीव्र पारेको प्राधिकरणले सव -स्टेसन र ट्रान्सर्फमरहरुमा पनि स्मार्ट प्रणाली जडान गर्न थालेको छ । प्राधिकरणको ऊर्जा दक्षता विभागले देशभरका सवस्टेसन र ठूला ट्रान्सर्फमरहरुमा स्मार्ट सिस्टम जडान गर्न लागेको हो ।
एक अध्ययनअनुसार देशमा आवश्यक प्रसारणलाइन तथा सवस्टेसन निर्माणको लागि झन्डै ७ खर्ब बराबर रकम आवश्यक छ । राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीले तयार पारेको प्रसारणलाइनको गुरुयोजनामा आगामी २० वर्षमा प्रसारणलाइन निर्माणका लागि ७ खर्ब बराबरको रकम आवश्यक रहेको उल्लेख छ । गुरुयोजनाका अनुसार २० वर्षमा ट्रान्समिसन लाइनमा मात्रै ३ खर्ब बराबरको लगानी आवश्यक देखिन्छ । सवस्टेसनमा भने २ खर्ब २६ अर्ब बराबरको रकम आवश्यक छ ।